Barashada SFI iyo Lacagta Abaal marinta | Somaliska
Maalintii arbacada ayaa waxaa dhaqan galay sharci cusub oo amraya in ardayda ku dhameysa koorsada SFI-ga mudo 1 sano gudahood ah la siiyo lacag dhan 12,000kr oo canshuurta banaanka ka tahay. Mashruucaan ayaa ku kici doonaa ilaa 10 milyan oo dollar, ayadoo ay naqdiyeen macalimiinta iyo dadka u xeel dheer arimaha waxbarashada taasoo ay sheegeen in ay ardayda ka badbadineyso. Balse wasiirada Isdhexgalka Sweden Nyamko Sabuni ayaa difaacday sharcigan ayadoo sheegtay in ay hada ardayda khaarkood iska fadhiyaan galaaska mudo sanooyin ah ayadoo mashruucaan uu ardayda ku dhiiri galinaayo in ay waxbarashada ku dadaalaan oo ay dhaqsi ku dhameeyaan. Fursadaan ayaa waxaa helaya dadkii iska diiwaan galiyay Kamuunadii ka bilowda bishii July ee 2010-ka.
Maalintii arbacada ayaa waxaa dhaqan galay sharci cusub oo amraya in ardayda ku dhameysa koorsada SFI-ga mudo 1 sano gudahood ah la siiyo lacag dhan 12,000kr oo canshuurta banaanka ka tahay.
Mashruucaan ayaa ku kici doonaa ilaa 10 milyan oo dollar, ayadoo ay naqdiyeen macalimiinta iyo dadka u xeel dheer arimaha waxbarashada taasoo ay sheegeen in ay ardayda ka badbadineyso.
Balse wasiirada Isdhexgalka Sweden Nyamko Sabuni ayaa difaacday sharcigan ayadoo sheegtay in ay hada ardayda khaarkood iska fadhiyaan galaaska mudo sanooyin ah ayadoo mashruucaan uu ardayda ku dhiiri galinaayo in ay waxbarashada ku dadaalaan oo ay dhaqsi ku dhameeyaan.
Fursadaan ayaa waxaa helaya dadkii iska diiwaan galiyay Kamuunadii ka bilowda bishii July ee 2010-ka.
March 10, 2011 at 20:42
AAniga hal su,aal ayaan qabaaaaa maxaaaaa luuqadeena soomaliga översättning looga dhigi waayey majiran miya dad u xeel dheer luuqada Svenska